Tatoazy manenjana, vahanay daholo ny fisalasalanao | Ny fanaovana tatoazy
Ny tombokavatsa amin'ny marika mihinjitra? Azontsika esorina indray mandeha ve ireo marika ireo na hatao tatoazy eo aminy aza? Afaka manimba marika ny tombokavatsa?
Amin'ity lahatsoratra ity dia nitondra ny valin'ireo fanontaniana ireo izahay mba hamahana ny fisalasalana rehetra momba ny ranomainty sy ny marika manjelatra. Tohizo hatrany ny famakiana raha te hahalala bebe kokoa ianao!
1 Azo atao ve ny manisy tombokavatsa amin'ny tombokavatsa?
2 Inona no tsy maintsy dinihina?
3 Inona no dingana arahin'ny tatoazy amin'ny marika manjelanjelatra?
4 Ny tatoazy mihinjitra maharitra mandrakizay?
6 Raha bevohoka aho, afaka manimba ny tatoazy ve ny marika mihinjitra?
Azo atao ve ny manisy tombokavatsa amin'ny tombokavatsa?
Raha ny marina, Azo atao ny mahazo tombokavatsa misy tombokavatsa, na amin'ny endrika nentin-drazana na amin'ny hafa izay manandrana manafina ireo marika fotsiny amin'ny volon'ny hoditrao. Ity fomba fanao farany ity, araka ny azonao an-tsaina, dia tena vaovao ary mbola vitsy ny manam-pahaizana manokana manolo-tena ho azy.
Inona no tsy maintsy dinihina?
Ny marika mihinjitra amin'ny tatoazy dia zavatra iray izay tsy maintsy mazava tsara. Izany no antony maha-zava-dehibe ny hanarahanao an'ity karazana torohevitra ity:
Ataovy ao an-tsaina fa tsy ny vatan'ny paratra rehetra akory dia azo atao tombokavatsa. Ohatra, raha marika be dia be ireo (ho hitanao fa manana loko mena na "mivoaka" avy amin'ny hoditra izy ireo, fa fotsy kosa ireo taloha), ny tatoazy dia mety hanimba ny toe-javatra ary hanelingelina ny fizotran'ny manasitrana ny vatanao. Ary koa, ny marika mihinjitra taloha dia mora kokoa ny manao tatoazy noho ny scars vaovao. Tsy azo atao koa ny manisy tatoazy lava be.
Tsy ho azonao atao ny mamaritra ny haben'ny tatoazy nataonao. Tsy midika izany fa tsy manana na inona na inona holazaina ianao momba izany, fa ny famolavolana farany dia miankina amin'ny halehiben'ny halaviranao. Ny artista manao tombokavatsa dia mety hanome soso-kevitra ny hanovana ny habe hahazoana vokatra tsara kokoa.
Aza adino fa ny tatoazy dia tsy manasitrana marika mihinjitramanarona azy ireo fotsiny izy ireo.
Farany, mitady matihanina iza no mahay manao tombokavatsa amin'ny volo sy izay manana traikefa be. Soso-kevitra ihany koa ny hiresahanao amin'ny dokoteranao momba izany.
Inona no dingana arahin'ny tatoazy amin'ny marika manjelanjelatra?
Misy dingana roa mety hitranga amin'ireo tatoazy ireo. Voalohany indrindra, raha mitady volavola mahazatra ianao dia tsy ho hitanao ny fiovana. Na izany aza, Ny sasany amin'ireo matihanina manafina ny marika mivelatra amin'ny ranomainty mitovy loko dia manaraka dingana hafa, miaraka amina basy tatoazy izay manamboatra mikoropika ny marindrano ary "mandoko" azy amin'ny ranomainty nofidian'ny artista tatoazy, izay tsy maintsy, mazava ho azy, ny zavatra akaiky indrindra amin'ny tonon-kodonao mba hijanonany ho tononkira mitovy.
Ny tatoazy mihinjitra maharitra mandrakizay?
Tatoazy amin'ny marika mihinjitra izay endrika "normal" maharitra mitovy amin'ny tatoazy mahazatra (Izany hoe miankina betsaka amin'ny anton-javatra toy ny fikarakaranao tsara ny tatoazy, raha toa ka miharihary amin'ny masoandro ...).
kosa, Ny tatoazy izay marika manjavozavo amin'ny camouflage dia mazàna very loko kely rehefa mandeha ny fotoana na koa, miankina amin'ny fitsaboana, dia hanjavona afaka telo sy dimy taona.
Ny tatoazy mihinjitra, izay karazan-koditra hafa amin'ny mahazatra, dia somary lafo kokoa noho ny antonony, indrindra fa raha endrika famolavolana mitady hanafina ireo marika amina ranomainty miaraka amin'ny volon-kodiny ireo. Amin'ity tranga ity dia akaiky kokoa ny fitsaboana amin'ny tarehy ny vidiny noho ny tatoazy, ary tsy mahazatra azy ireo ny manisa an'arivony euro.
Raha bevohoka aho, afaka manimba ny tatoazy ve ny marika mihinjitra?
Toy ny be eo amin'ny tontolon'ny tombokavatsa, miankina betsaka amin'ilay olona sy ny lanja azony amin'ny fitondrana vohoka. Amin'ny ankapobeny, omena azy manokana ny endriny indrindra amin'ny faritra toy ny tsinay, tratra na valahana, fa afaka miverina amin'ny toetrany taloha izy tamin'ny nahaterahan'ny zaza.
Mazava ho azy, miankina amin'ny olona sy ny karazana tatoazy indray izany. Ohatra, ny tombokavatsa lehibe dia maivana kokoa noho ny kely kokoa.
Manantena izahay fa nahita ity lahatsoratra ity momba ny tombokavatsa tombokavatsa mahaliana ianao ary nanampy anao hamaha fisalasalana vitsivitsy. Lazao aminay, manana tombokavatsa misy tombokavatsa ve ianao sa mikasa ny hanao izany? Aza hadino fa afaka milaza aminay izay rehetra tadiavinao ianao amin'ny hevitra!
Fuentes: StyleCraze, bydie.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tattoos amin'ny marika manjavozavo, mamaha ny fisalasalanao rehetra izahay
Fianakaviana misy tatoazy 4, hevitra vitsivitsy ho an'ny aingam-panahy